SIDA LOO KORO SURFINIA, XEERARKA KORAYA IYO DARYEESHA UBAX - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Tiknooloojiyada teknooloojiyada iyo daryeelka caafimaadka
Badanaa balakoonnada, baddelada iyo meelaha banaanka ah waxaad ka heli kartaa ubaxyo xiiso leh - sida petunia, laakiin ma ahan "petunia". Sidaas, tani waa nooca petunia - Surfinia.
Surfinia - Tani waa guntanka xayawaanka nacnaca leh, kaas oo la yiraahdo jilayaal Japanese ah labaatan sano ka hor. Waxay kala duwanyihiin ubaxyo jilicsan, caleemo dhaadheer iyo xajistaan ​​xitaa roobka kadib. Midabka ubaxa waa mid aad u kala duwan, cabirkooduna wuxuu gaaraa 6 cm Sicirka surfinia dhowr bilood.
Ma taqaanaa? Si ka duwan sida loo yaqaan "petunia", surfini waxa uu leeyahay muddo dheer (ilaa 2 mitir), kaas oo, hoos u dhacaya, abuuro biyo kulul. Beeladan waxay sidoo kale u adkaysata cudurada iyo cayayaanka.
Sida loo abuuro surfini
Plant Surfynia waxay noqon kartaa laba siyood: miraha ama gooynta. Abuuridda abuurka ayaa ah hab hawleed badan oo adag. Waxay u baahan doontaa sabir iyo daryeel taxadar leh geedo. Si aad u noolaato petunia surfiniya, beerashada iyo daryeelka waa inay sax yihiin.
Xulashada abuurka iyo beerahooda
Seeds for beerto waxay u baahan yihiin inay doortaan dukaamada beerta la xaqiijiyay oo aad ka qaadi kartid midabka iyo nooca aad u baahan tahay. Faa'iidada ka soo iibsashada alaab-iibiye la aaminsan yahay waa fursad lagu helo talo ku saabsan sida loo koro Surfynia.
Si ay abuurka surfiniia u soo baxaan, waxaad u baahan tahay inaad ogaato goorta ay beero abuurto on geedo. Abuur abuurka dabayaaqada jiilaalka ama horraanta gu'ga. Tan iyo abuurka aad u yaryar, ku qas iyaga ciid ka hor beerashada ama u adeegso abuurka xayawaanka.
Abuur kuwa dhulka ku yaal, oo aan u seexan dhulka. Laga soo bilaabo kor aan ku buufin leh buufin, daboolaa filim ama dhalo. Xaaladda heerkulku waa inay ahaataa + 21-23 ° C. Ciidda waa in la qoyo.
Ku dhejinta surfinia iyadoo la adeegsanaayo gooyn ma qaadan waqti badan, in kastoo aad weli tahay inaad daryeelto iyaga. Goynta waxaa la qabtaa xilliga dayrta. Ka gooyso qalabka beeraha ee loo baahan yahay in lagu beeray ciidda diyaarisay.
Waa muhiim! Iska yaree caleemaha ayaa loo baahan yahay in la beero laba saacadood gudahood, sidii wakhti ka dambeeya, awooddeeda inay ku degto si aad u yar.
Ka dib markii laga beerto, gooyn ayaa lagu daboolay bireed iyo ku rid meel diiran. Daryeelidda gooynta waa waraabiyo oo qoyaan ciidda.
Si aad u hesho caafimaad leh oo xoog leh oo firfircoon oo loo baahan yahay:
bacriminta adag ee dharka adag oo leh potassium;
nasasho u dhexeeya labiska 2 toddobaad;
ku-beddelashada dheriyo goonni ah ka dib markii sprouts yar yar ay leeyihiin caleen weyn;
dhererka saxda ah;
nalalka iftiinka iyo xaaladaha heerkulka + 20-23 ° C.
Haddii geedo of Surfini koraan iyo daryeelka ay yihiin sax ah, ka dibna May ee duurka weyn quruxsan ka soo biqin doonaa caleemaha yar yar in lagu beeray karo dhulka u furan.
Halkee ayay ka fiican tahay in la koro surfiniya, waa maxay carrada iyo iftiinka
Waxaa ugu wanaagsan in la koro surfinia dhinaca qorraxda ka fog qoraalada iyo hooska. Ka hor inta aan la daadin, daryeelka waa in laga qaadaa dhulka iyo nalalka. Carrabku waa inuu ahaadaa mid bacrin ah. Tani waxay noqon kartaa dhoobo ama carrada ciidda.
Waa muhiim! Humus, gaar ahaan cusub marka laga beerto Surfini lama sameyn karo. Tani waxay keeni kartaa horumarinta cudurada fangas.
Surfini qorraxdu waa shuruuda horumarinta. Ka taxadar inaadan ku korin meelaha miyiga ah.
Sidee si habboon u beeraan warshad dhul furan, waxaan ku dhaqaaqnaa surfiniya duufaan
Ka hor intaan la dhicin, surfinia waa inay noqotaa diirinta geedka. Si arrintan loo sameeyo, maalmo yar ka hor intaan la beeriin waa in la qaadaa hawo cusub 2-3 saacadood maalintii. Ka dib markaa, dhirta waxay u dhigantaa xaalado cusub si dhakhso ah.
Beeray isku mid ah Surfinia, kaas oo geedo koray. Hydrogel ama perlite ayaa lagu dari karaa si loo kordhiyo bacriminta. Si surfini u hesho muuqaal qurux badan, waxaa lagu beeray sawirada balakoonka ama dheriga dhagxiga leh godadka dhinacyada geedo. Sidaa darteed, baadiyaha waxay yeelan doonaan geedka canka ah ee cufan.
Ma taqaanaa? Iyadoo roobab culus oo dheeraaday, surfinia ayaa ugu qarsoon qolka. Dareemo weyn ayaa jeexi kara ubaxyo jilicsan oo waxay yeelan doontaa muuqaal cidhiidhi ah oo muuqaal ah.
Xeerarka waraabinta iyo quudinta dhirta
Surfinia iyo petunia waxay ku kala duwan yihiin awooda ay u dulqaadan lahaayeen qalajinta ciidda marka hore. Laakiin weli waraabiyo surfiniya loo baahan yahay. Ha ilaawin inaad ku buufisid dhalada buufinta, oo si aad ah ugu biyo badan maalmo qallalan.
Dharka ugu sareeya ayaa ugu wanaagsan usbuucii mar. Bacriminta ku haboon leh content potassium. Taabashadani waxay taageertaa surfinia inta lagu jiro ubax. Sababtoo ah qadarka ku filan ee potassium baadiyaha waxay noqon doontaa geedka iyo bloom dheer.
Sidaa darteed, haddii aad go'aansato in la helo ubax qurux badan sida surfiniya, ha iloobin daryeel ku habboon iyada. Adeer si aad u hesho talooyin ku saabsan sida loo koro iyo daryeelka mashruuca Zurfenia, waxaad qurxin kartaa beertaada, balakoonka ama terrace leh ubax qurux badan oo ku farxi doona guga ilaa dayrta.